Mpanamboatra mpitrandraka evaporative - Mpamatsy sy orinasa mpanamboatra etona i Sina
Condenser etona etona an'ny SEC Series
Condenser etona etona SEC dia misy fantsona fikojakojana ao anatin'ireo fitaovana, ny mpiasa Maintenance dia afaka manova mora foana ny baffle rano, mpameno fifanakalozana hafanana PVC, sns.
SLC Series mpitrandraka etona
Ny SLC condenser evaporative dia mitambatra amin'ny famolavolana ary efa nangonina talohan'ny fitaterana, noho izany dia mitahiry ny vidin'ny fitaterana sy ny vidiny ambony takiana amin'ny fivoriambe eo an-toerana.
Condenser etona an'ny SVC Series
Ny andiana condenser etona dia azo entina anaty kaontenera ihany koa. Ny condenser evaporative andiany SVC dia tena mety ihany koa ny mitazona azy, ary ny takelaka akorandriaka amin'ny lafiny roa amin'ny mpankafy dia azo esorina, miditra mora foana amin'ny rafitra mpamily fehikibo.
STC Series etona mpanera
STC andian-dahatsoratra evaporative condenser dia mandray ny famolavolana suction ambony, ny mpakafy mikoriana axial dia apetraka eo an-tampony, ary ny motera dia mitondra ny impeller mivantana.
Condenser dia iray amin'ireo fitaovana fampifamadihana lehibe indrindra amin'ny rafitra fampangatsiahana. Ny asany dia ny mangatsiaka ny hafanana avo sy ny entona mihodina ho ao anaty vata fampangatsiahana rano.
1.Snowkey teknolojia famehezana manokana
2. Amin'ny alàlan'ny teknolojia japoney, ny Etazonia dia manafatra tombo-kase polyurethane mari-pana avo lenta miaraka amin'ny fisorohana mari-pana avo / ambany, aorian'ny fanamafisana, fisehoana malama, fihenan-tsakafo mahafinaritra, hahatratrarana vokatra maharitra-porofo maharitra, ity teknika ity dia ampiasaina amin'ny andiany rehetra .